Rakitra (kajimirindra) Info. About. What's This?
ⓘ Rakitra (kajimirindra)
Ny atao hoe rakitra aminny kajimirindra dia firaketana fampahalalana arakisa navondrona tanaty toerana iray ary nomena anarana tokana, ary anaty maharitra toa ny kapila mateza, CD-ROM na bandy arakandriamby.
Samihafa ny firafitry ny fampirimana rakitra arakaraky mpandrindra milina. Ho anny mpandrindra milina izay avy amini Linux izao ohatra dia / anja sompirana ny fototry ny rakitra na inona na inona ny isanny kapila mateza anananilay solosaina ; tsy misy izany ny ao amini Windows. Arakaraky ny isanny kapila mateza, na eo an-toerana na eo an-tambajotra, ny isanny fototra. Ny fototry ny rakitra anaty kapila mateza iray dia mitondra litera iray A, B, C, D, sns. arahana teboka roa ary anja sompirana toa izao: C:/ ; D, sns. Amini Windows dia ao aminny C:/ no ahitana ny rakitra mampandeha ny mpandrindra milina.
Aminny lafiny ara-teknika, ny rakitra dia fifanohitohizana 1 iray sy 0 aotra, izany hoe isa roa fototra iray manana halava voafaritra fa afaka miovaova.
Aminny ankapobeny, dia misy anaran-drakitra ny rakitra izay ahafahana mamaritra ary mamaky azy. Aminny tontoloni Windows, manana tovana io anaran-drakitra io, izay ahalalàna ny fandaharana na rindrankajy afaka mamoha azy. Manana metadata koa ny rakitra, izay fampahalalana mikasika ny fampahalalana: ny halavanilay rakitra na ny tomponilay rakitra. Arakarakio metadata io dia mety azo lazaina fa fandaharana mahaleotena ilay rakitra, na rakitra nafintina, na lahatsoratra, na sary, na horonantsary, na feo.
Zavatra maha-izy azy ny rakitra ny votoatiny. Samy misongadina aminny votoatiny ny rakitra tsirairay. Mety ho aino aman-jery na soratra ny votoatinny arakitra.
Ireo ny sokajin-drakitra vitsivitsy:
2. Famantarana ary fampirimana ny rakitra
Aminny rafi-tsolosaina ankehitriny dia fantatra aminny alalanny anarany ny rakitra. Aminny mpandrindra milina sasany dia miaraka aminilay rakitra ny anarany. Aminny hafa, tsy mitondra anarana na inona na inona ilay rakitra, ary tondroinny rohy izay manana anarana. Aminio tranga voalaza frany io, afaka mahita ireo rohy aminny alalanilay rakitra ilay mpampiasa, fanoharana diso anefa izany, indrindra rehefa maro ireo rohy mitondra any amy rakitra tokana.
Mety hita ao anaty ny petra-drakitra ny rakitra na ny rohin-drakitra. Na dia izany aza, aminny ankapobeny, dia mety ahitana na lisi-drakitra na lisi-rohin-drakitra ny petra-drakitra iray.
3. Fiarovana ny rakitra
Ahafahana miaro rakitra ny ankamaroanny rafi-tsolosaina ankehitriny mba tsy hisianny fanimbana niniana. Nametraka alalana aminny rakitra ireo solosaina izay mamela ny fisianny mpampiasa maro ahafahana mamehy ny fahafahanizy ireo mamorona, manova na mamafa rakitra na petra-drakitra. Ohatra, azo avela mamaky rakitra na petra-drakitra iray ihany ny mpampiasa iray, fa tsy mahazo manova na mamafa azy ; na azo omena alalana ny mamaky na manova rakitra na petra-drakitra ny mpikambana iray hafa, fa tsy mahazo mampandefa azy. Azo atao tsy ho hitanireo mpampiasa tsy nomena alalana koa ny rakitra iray. Ahafahana mitazona fampahalalana tsy ho hitanny olona tsy niriana ary fiarovana aminny fiovana sy famotehana tsy nahazoan-dalana ny fametrahana zo manokana.
4. Fanakarana aminny alalanny API
Hahafahanny mpampiasa ary ireo mpanoratra rindrankajy mamaky rakitra tokana tahirizina ny mpandrindra milina, aminny alalanny fenitra fametrahana anarana, ary mikirakira azy ireo araky ny API iray.
Fisaka, tsy misy rafitra manokana ary tsy mahazaka ny buffering aminny lafinny mpampiasa ny API fototra napetraki UNIX. Tsy mahavita zavatra afatsy ny mamaritra fitoerana misy azy, mamaky ary manoratra ilay API fototra. Azo itarina na afintina ny rakitra iray. Fitohitohizana oktety ny endriky ny rakitra iray aminizany lenta izany.
Aminny POSIX ary Unix indray, fitohitohizana oktety ny anaran-drakitra. Amini Windows izy ireo dia soratra Unicode. Noho izany amini Windows, mizara roa ny API famakiana rakitra, ka ny API iray dia ahafahana mamaky ilay rakitra aminny alalanny fampiasana ny soratra Unicode UTF-16 ary ny iray dia hahanomezana anarana ny rakitra aminny fitohitohizana oktety aminny alalanny mekanisma "an-toerana" anglisy: locale.
Mety miteraka tsifahazakana araky ny "an-toerana" ny fanaovana izany zavatra izany.
Naorina taminny 26 Jiona 1945 ny Firenena mikambana taminny nampiharana ny dinanny Firenena Mikambana hanoloana ny Fikambananny Firenena frantsay: Société des Nations, izay tsy nanao ny tokony ho asany izany hoe hanakana ny Ady Lehibe Faharoa, ary hametrahana toerana fifanakalozan-kevitra iraisam-pirenena.
Wikipedia: Rakitra (kajimirindra)